Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » IATA: mihoatra ny fahafaha-mitombo ny fitaky ny entana amin'ny habakabaka
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Raha mbola kivy be ny dia iraisam-pirenena dia vitsy ny fiaramanidina mpandeha manome ny fahafahan'ny kibony entana. Ary mety hihamafy ny tavoahangin-tseranana famatsiana rehefa manohy mampitombo ny famokarana ny orinasa.
Ny fangatahana eran-tany, refesina amin'ny kilaometatra maro entona (CTK), dia 7.7% raha oharina tamin'ny Aogositra 2019 (8.6% ho an'ny asa iraisam-pirenena).
Nihena kely ny hafainganan'ny fitomboana raha oharina tamin'ny volana jolay, izay nahitana fiakaran'ny vidin'ny 8.8% (raha oharina amin'ny haavo talohan'ny COVID-19).
Niato ny fanarenana ny fahaizan'ny entana tamin'ny volana Aogositra, 12.2% raha oharina tamin'ny Aogositra 2019 (13.2% ho an'ny asa iraisam-pirenena). Tamin'ny fe-potoana isam-bolana dia nilatsaka 1.6% ny fahaiza-manao - ny fihenam-bidy lehibe indrindra hatramin'ny Janoary 2021.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) namoaka ny angon-drakitra Aogositra 2021 ho an'ny tsena fitaterana an-habakabaka manerantany izay mampiseho fa nitohy ny fitomboan'ny firoboroboan'ny fitakiana fa ny tsindry amin'ny fahaiza-manao kosa dia miakatra.
Satria ny fampitahana eo anelanelan'ny 2021 sy 2020 ny valim-bolana isam-bolana dia voasivan'ny vokadratsin'ny COVID-19, raha tsy misy fanamarihana hafa, ny fampitahana etsy ambany dia hatramin'ny Aogositra 2019 izay manaraka ny lamina fitakiana mahazatra.
Ny fangatahana eran-tany, refesina amin'ny kilaometatra maro entona (CTK), dia 7.7% raha oharina tamin'ny Aogositra 2019 (8.6% ho an'ny asa iraisam-pirenena). Ny fitomboana amin'ny ankapobeny dia mijanona ho matanjaka raha oharina amin'ny firoboroboana maharitra eo ho eo amin'ny 4.7%.
Ny toekarena dia manohy manohana ny fitomboan'ny entan'ny rivotra nefa somary malemy kokoa noho ny tamin'ny volana lasa izay nanondro ny firoboroboan'ny famokarana manerantany:
Ny singa famokarana mpamokatra volana Aogositra an'ny Indeks Purchasing Managers (PMI) dia 51.9, manondro fisondrotana mandritra ny fotoana fohy raha alefa amin'ny rivotra ireo baiko ireo. Io dia fihenan'ny 54.4 tamin'ny Jolay.
Ny singa amin'ny kaomandy fanondranana entana vaovao an'ny volana Aogositra dia tsara ho an'ny entam-barotra amin'ny rivotra, na dia tsy dia nanohana firy noho ny tamin'ny volana teo aloha aza. Mitohy ny fanitarana amin'ny sehatra manerantany, na izany aza, nisy ny fihenan'ny toekarena vao misondrotra.
Ny tahan'ny fivarotana amin'ny fivarotana dia mijanona ambany hatrany alohan'ny vanim-potoana farany fivarotana farany. Ity dia tsara ho an'ny entam-barotra amin'ny rivotra, na izany aza, ny famerana ny fahaiza-manao lavitra dia mampidi-doza ity.
"Ny fangatahana entam-piaramanidina dia volana iray natanjaka indray tamin'ny volana aogositra, 7.7% raha oharina amin'ny ambaratonga talohan'ny COVID. Maro amin'ireo tondro ara-toekarena no manondro vanim-potoana faratampon'ny fiafaran'ny taona. Raha mbola kivy be ny dia iraisam-pirenena dia vitsy ny fiaramanidina mpandeha manome ny fahafahan'ny kibony entana. Ary mety hihamafy ny tavoahangin-tseranana famatsiana rehefa manohy mampitombo ny famokarana ny orinasa, ”hoy izy Willie Walsh, IatăTale jeneraly.
IATA: ny fitomboan'ny fitaky ny entana amin'ny habakabaka eran-tany dia mihoatra ny fahafaha-manana | Bilaogin'ny mpampahalala vaovao hoy:
September 29, 2021 ao amin'ny 20: 20
[…] IATA: mihoatra ny fahafaha-mitombo ny fitomboan'ny fitakiana entana amin'ny habakabaka […]